गगन थापाको प्रश्‍न : रक्षामन्त्री कालापानीमा तीर्थयात्रा गएका हुन् ? – Koshidaily
गगन थापाको प्रश्‍न : रक्षामन्त्री कालापानीमा तीर्थयात्रा गएका हुन् ?
access_alarms Koshi daily २८ बैशाख २०७७, आईतवार ०९:०४	chat_bubble_outline 0	Comments
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले भारतले नेपाली भूमि मिचेको प्रसंगगमा रक्षमन्त्री ईश्वर पोखरेलको भूमि बारे प्रश्न उठाएका छन् । भारतले नेपाली भूमि लिुलेक क्षेत्रमा सडकमार्ग बनाएको बारे परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीलाई आइतवार प्रतिनिधिसभामा प्रश्न गर्दै थापाले रक्षामन्त्री पोखरेलको भूमिकाबारे प्रश्न उठाएका हुन्।
भारतले सन् २००५ देखि नेपाली भूमिमा बनाइरहेको सडक समेत नदेख्ने रक्षामन्त्री कालापानी क्षेत्रमा पुगेकोबारे व्यंग्य गरेका हुन् । उनले हेलिकोप्टरबाट पनि आफ्नो भूमिमा भारतले बनाएको सडक नदेखेको भन्दै रक्षामन्त्री पोखरेल काला पानीमा तीर्थयात्रा गर्न गएको हुन सक्ने कटाक्ष गरे। ‘रक्षमन्त्री कालापानीमा तीर्थयात्रा गर्न गएका हुन् ? होइन भने नेपाली भूमिमा बनिरहेको सडक उनले किन देखेनन् ?’
थापाले सोधे, ‘सडक उद्घाटनपछि मात्रै देख्ने यो कस्तो तरिका हो? नेपालले सधैँ पछुताउनु मात्रै पर्ने हो?’ नेता थापाले सरकारले अब नेपालको भूमि तिमीलाई प्रयोग गर्न दिँदेनाँै भन्न सक्नुपर्ने बताए । ‘भारतको दादागिरी र चीनको न्यानो स्वागतको प्रतिरोध गर्न कांग्रेस तयार छ’, उनले भने, ‘नेपाली भूमि रक्षाका लागि दह्रिलोसाथ उभिन हामी तयार छौँ।
उनले प्रतिपक्षी दलबाट यसबारेमा सरकारले के सहयोग चाहेको छ त्यसबारेमा जान्न चाहेको उल्लेख गरे। स्मरणीय कुरा, रक्षामन्त्री पोखरेल गत फागुन ५ गते दार्चुला सदरमुकामबाट नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर चढेर कालापानी क्षेत्र हेर्न गएका थिए। तर उनी सवार हेलिकोप्टर कालापानीबाट करिब १५ किलोमिटर वरैबाट फर्किएको थियो।